Tanàna 10 azo idirana indrindra any Eropa no voalaza anarana
Home » Lahatsoratra farany farany » Fizahan-tany azo idirana » Tanàna 10 azo idirana indrindra any Eropa no voalaza anarana
Fizahan-tany azo idirana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Hospitality Industry • Vaovao • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Na dia maro amintsika aza no te-hitety izao tontolo izao dia tsy mora ho an'ireo izay tsy afa-mihetsika loatra ary miantehitra amin'ny fanampiana avy amin'ny hafa.
Làlan-dresaka adihevitra be adihevitra ny fitsangatsanganana azo zahana, saingy maro ny tanàna eropeana mbola tsy manova ny toerana alehany ary mamela azy io ho azon'ny rehetra.
Miaraka amin'izany ao an-tsaina, nandinika ireo zava-mahaliana ny manam-pahaizana momba ny dia - anisan'izany ireo mari-toerana sy tranombakoka - fitateram-bahoaka sy hotely any amin'ireo tanàna eropeana be mpitsidika indrindra mba hametraka ny laharana amin'ireo tanàna mora azo indrindra any Eropa.
Toeram-pizahantany mora azo indrindra
Ny manam-pahaizana dia nandinika ireo toerana manintona 15 faratampony ho an'ny tanàna eropeana tsirairay, manadihady ny fahazoana mahazo seza misy kodiarana, na misy fanampiana azo alaina amin'ny fisarihana, ny fijanonana eo an-toerana, ny fitsangatsanganana an-tsokosoko ary ny trano fidiovana nohaingoina isa isaky ny tanàna.
Ny fikarohana dia nahitana fa ny toa ny Lapan'i Buckingham ao Londres, ny The Guinness Storehouse any Dublin ary ny Louvre Museum ao Paris no anisan'ny manintona indrindra any Eropa.
Ny tanàna 10 be mpampiasa indrindra any Eropa
1. Dublin, Repoblika Irlandy
2. Wina, Aotrisy
3. Berlin, Alemana
4. London, Royaume-Uni
7. Barcelona, ​​Espana
9. Prague, Repoblika Tseky
Londres sy Dublin no mitarika ny lalana mankany amin'ireo toerana mahaliana
Araka ny efa voalaza tetsy ambony, ny fidirana amin'ny ankapobeny - mifototra amin'ny fanamorana fidirana amin'ireo toerana manintona, trano fisakafoanana ary fitateram-bahoaka matetika - any Dublin dia mihomehy ny tanàna eropeana hafa, hoy ny fikarohana.
Na izany aza, ny renivohitra UK, Londres, dia naka ny toerana avo indrindra notadiavina noho ny isan'ny mari-trano sy tranombakoka azo idirana, miaraka amin'ny fahatongavan'i Dublin. Ny tia ny Lapan'i Buckingham sy ny Tower of London dia mahagaga fa ireo no manintona indrindra eto an-tanàna. Londres dia nahatratra 319 salan'isa isa ho an'ny fahazoana mahasarika ny manintona, raha ampitahaina amin'i Dublin's 286. Na izany aza, very isa i Londres raha ny amin'ny fitateram-bahoaka.
I Wina, indrindra indrindra, dia manana zavatra betsaka hatolotra ihany koa ireo mpandeha manana fivezivezena voafetra. Betsaka amin'ireo manintona sary famantarana no nohavaozina mba hahazoana antoka fa azo idirana tanteraka izy ireo - toa ny The Hofburg sy ny Schonbrunn Palace and Gardens, nanomboka ny 1400 sy 1700 tsirairay avy. Toy izany koa, 95% ny rafitra metro an'i Vienna dia tsy misy dingana, miaraka amin'ny fanampiana ho an'ny olona mihena ny fivezivezena.
I Prague dia eo amin'ny toerana farany indrindra ho an'ny fisarihana azo zahana
Vaovao ratsy ho an'ireo izay mandeha mankany Prague. Hitan'ny manam-pahaizana fa ny mari-pamantarana famantarana sy ny tranombakoka ao Prague no mora idirana indrindra amin'ireo tanàna be mpitsidika indrindra any Eropa. Betsaka ny manintona no tsy manome fidirana seza misy kodiarana ary ny iray kosa tsy nanana fijanonana eo an-toerana na akaiky ho an'ireo mpitsidika sembana.
Ny fitateram-bahoaka ho an'ny mpizahatany no azo zahana
Eo amin'ny lafiny fitateram-bahoaka dia lohalaharana i Dublin, Wina ary i Barcelona. Ny rafitra Dublin Luas dia azo idirana amin'ny mpampiasa rehetra. Mampalahelo fa na izany aza, ny renivohitra Britanika, London, dia nitana ny laharana faharoa ho an'ny fitateram-bahoaka - nahagaga noho ny isan'ny fisarihana azo idirana ao an-tanàna.
Isan-taona dia mpandeha maherin'ny 1.3 miliara no mitazona ny iray amin'ireo sary famantarana fanta-daza an'i London. Na izany aza, amin'ny maha-iray amin'ireo toeram-piantsonan'ny metro tranainy indrindra eran'izao tontolo izao, izy io dia iray ihany koa amin'ny iray amin'ireo tsy azo idirana. Raha nanambara ny TFL fa mitady hanavao ny tambajotra izy ireo, tsy ho ela dia ho an'ireo olona 1.2 tapitrisa amin'ny sezakodia, mipetraka ao an-tanàna.
I Wina sy i Barcelona dia mamintina ireo telo voalohany ho an'ny fitateram-bahoaka
Raha mbola tsy hahatratra ny fenitry ny rafitra fitaterana Luas ao Paris ny Paris Metro, dia samy nanomana ny làlana ho an'ny toeran-kafa eropeana maro hafa i Vienna sy i Barcelona - tonga amin'ny isa roa sy telo avy.
Nankalazaina matetika i Vienna noho ny fahazoana miditra, miaraka amin'ny 95% amin'ireo gara U-bahn sy S-bahn no azo idirana tanteraka. Tsy mahagaga raha niditra tao amin'ireo tanàna 10 be mpitsidika indrindra i Wina tamin'ny taona lasa.
Laharana fahatelo amin'ny fidirana amin'ny fitateram-bahoaka amin'ny ankapobeny i Barcelona, ​​miaraka amin'ny 91% ny tobin'ny metro azo ampiasaina ho an'ny mpandeha rehetra. Mampalahelo fa na izany aza, ny fahazoana miditra ny manintona an'i Barcelona no faharoa ratsy indrindra, any Prague ihany. Ireo mari-toerana ara-tantara, toa an'i La Sagrada Familia sy Parc Guell, dia mbola havaozina.
Nositrikin'i Paris ny ambany mba hahazoan'ny fitateram-bahoaka
Paris dia toerana malaza izay tsy nanisy lanjany ny laharam-pahamehana amin'ny fidirana toy ny tanàna eropeana hafa. Ny renivohitr'i Frantsa dia tonga amin'ny toerana farany ho an'ny fitateram-bahoaka, izay 22% fotsiny ny gara (65 amin'ny 302) no azon'ny rehetra idirana.
Na eo aza izany, ny Paris Metro dia tokony ho iray amin'ireo gara metro eropeana mora havaozina araka ny filazan'ny mpamolavola. Ireo gara metro, eo ho eo, manodidina ny enina metatra ambanin'ny tany - raha oharina amin'ny an'ny London, izay 25 metatra ambanin'ny tany.
I Londres no mety ho tanàna eropeana be mpitsidika indrindra tamin'ny taon-dasa (hoy ny Euromonitor International), saingy ny fahazoana miditra ny ambanin'ny tany sy ny tany mbola tsy nifanaraka tamin'ny satan'izy ireo. Nahagaga fa nametraka ny laharana faharoa tamin'ny farany i Londres ho an'ny fitateram-bahoaka azo idirana - nikapoka mafy ny Paris Metro.
Hitan'ny manam-pahaizana fa ny 29% amin'ireo gara London Underground ihany no manome fidirana maimaimpoana ho an'ireo mpampiasa, miaraka amin'ny 52% ihany amin'ireo onjampeo ihany koa no azo idirana ao amin'ny London Overground. Raha ampitahaina, dia azo idirana tanteraka ny rafitry ny tratra Luas any Dublin.
Hotely azo tratrarina indrindra
Ny manam-pahaizana koa dia nandalina ireo hotely dimy voalohany ao amin'ny tanàna tsirairay, miorina amin'ny Tripadvisor, ary nahita fa i London sy Dublin indray, avo lenta amin'ny fidirana. Berlin koa dia fanampin'ireo telo voalohany.
Londres, Berlin, Milan ary Dublin no mitarika ny hotely azo idirana
Rehefa nanadihady ireo hotely dimy voalohany isaky ny tanàna eropeana izy ireo dia hitan'ireo manam-pahaizana fa i London, Berlin ary Dublin no lohalaharana amin'ny hotely azo idirana. I Londres no tonga voalohany miaraka amin'ny 28% ny efitranon'ny hotely ao amin'ny hotely dimy voalohany (araka ny Tripadvisor) azo idirana tanteraka ho an'ny rehetra, miaraka amin'i Berlin faharoa (27%), Milan fahatelo (19%) ary Dublin fahefatra 11%.
Samy manome efitrano maromaro azo idirana (10% tsirairay avy) i Wina sy i Barcelona, ​​miaraka amin'ny rafitry ny fitateram-bahoaka izay anisan'ny tsara indrindra any Eropa.
Na izany aza, araka ny fikarohana nataonay, ny tanàna sasany izay manolotra fitaterana lehibe sy manintona indrindra dia tsy mirehareha amin'ny torapasika azo idirana.
Polonina no manome ny morontsiraka mora azo indrindra
Mahagaga fa manolotra morontsiraka azo idirana tanteraka any Eropa kokoa i Polonina noho ny toerana hafa. Misy torapasika 20 ao amin'ny firenena izay manome fidirana amin'ny morontsiraka sy rano ho an'ny olona amin'ny seza misy kodiarana, ary koa ny fahazoana mankany amin'ny rano ho an'ireo izay sembana amin'ny fahitana.
Ny laharana faharoa amin'ny lohatenin'ireo morontsiraka mora azo indrindra dia i Espana, manolotra morontsiraka 12 izay azon'ny mpampiasa rehetra atao. I Espanya koa dia mirehareha amin'ny sasany amin'ireo fitateram-bahoaka lehibe indrindra ho an'ireo izay mila fanampiana, miaraka amin'i Barcelona izay manangona ireo telo voalohany ho azontsika idirana ao amin'ny metro.
Italia no mitana ny laharana fahatelo amin'ireo morontsiraka mora azo, miaraka am 11 ho an'ireo tsy voafehin'ny fivezivezena ary manana fahasembanana amin'ny fahitana.
Ny UK kosa dia tara ao ambadiky ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy eropeana, tsy manome afa-tsy morontsiraka efatra azo idirana tanteraka, any atsimo: Porthtowan, Sandy Bay, Bournemouth, Southbourne Beach ary Margate Main Sands.
Mampalahelo fa mbola lavitra ny lalana mankany amin'ny tanàn-dehibe eoropeanina maro, saingy amin'ny alàlan'ny fidirana amina lohahevitra niadian-kevitra be dia be io, dia mety hahita fiovan'ny fomba fiasa isika ato ho ato.